Baahin: Khamiis, May 17, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Galkacyo. Mudaaharaad rabshado wata oo ka dhacay bariga magaalada Hargeysa; Suldaan Mahad M. Xirsi ayaan waraysanay; Gen. Mudan, wasiirka amniga ee Puntland oo ku celiyey in ciidamada AMISOM la keeni doono Puntland; Ahlu sunna oo ka warabixiyey qaraxyo ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Galgaduud; Baarlamaanka Galmudug oo iclaamiyey mudada u harsan xukuumada M/weyne Caalim. – Radio Daljir
Baahin: Khamiis, May 17, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Galkacyo. Mudaaharaad rabshado wata oo ka dhacay bariga magaalada Hargeysa; Suldaan Mahad M. Xirsi ayaan waraysanay; Gen. Mudan, wasiirka amniga ee Puntland oo ku celiyey in ciidamada AMISOM la keeni doono Puntland; Ahlu sunna oo ka warabixiyey qaraxyo ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Galgaduud; Baarlamaanka Galmudug oo iclaamiyey mudada u harsan xukuumada M/weyne Caalim.
Maajo 17, 2012 12:00 b 0
Islam Bashiir Islam Cabdille oo lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho.
M/wayne Shariif oo khudbad ka jeediyay kulanka Golaha Amaanka ee QM ka yeeshay xaaladda Soomaaliya